Egwuregwu Xbox One ga-abịa Xbox Game Pass site na ụbọchị mbụ | Akụkọ akụrụngwa
Eder Esteban | | Ndi Consolas
Microsoft elekwasịla anya ogologo oge na mbọ nke ndị ọrụ Xbox One. Companylọ ọrụ ahụ ekpebiela ịnye ọrụ dị mma. Ya mere, ọnwa gara aga ha gosipụtara Ihe eji eme njem Xbox, ọrụ ndenye aha na-enye gị ohere ịnweta karịa 100 egwuregwu maka a ọnụahịa nke euro 9,99 kwa ọnwa. O yiri ka usoro azụmahịa a ọ na-arụ ọrụ nke ọma. N'ihi na ụlọ ọrụ siri ike na ya.
Kemgbe ha kwuputara nke ahụ A ga-etinye nhapụ niile pụrụ iche na katalọgụ Xbox Game Pass site na ụbọchị wepụtara ha. Obi abụọ adịghị ya, otu ihe na-achọ ịkwalite ọrụ a n'ụzọ dị ịrịba ama. Nke ahụ ga - enyere ọtụtụ ndị ọrụ aka ịmepụta akaụntụ.
Xbox Game Pass dị site na June 2017. Ọ bụ ugbua ugbua dị na mba 40. Ruo ugbu a, ọrụ ahụ ga-amalite egwuregwu kwa ọnwa. Ma, ha bụ egwuregwu Xbox One na ụfọdụ aha ochie. Ma ọ dịghị mgbe ọ bụla nnukwu aha. Ya mere, mgbasa ozi a gbanwere ihe niile.
Kemgbe ugbu a ha na-achọ site na otu ụbọchị, aha kachasị mkpa nke ruru ndị ọrụ Xbox One dịkwa na ọrụ a. Mgbanwe dị ukwuu site na Microsoft. Egwuregwu mbụ ga-erite uru na mkpebi a bụ Oké Osimiri nke ndị ohi na-abịa na March 20.
Na mgbakwunye, a na-ekwupụtakwa onyinye ndenye aha ọhụrụ. Iji maa atụ, a Ndenye ndenye aha Xbox Game Pass nke ọnwa isii dị ọnụahịa $ 6. Onyinye a ga-abia n'elu ikpo okwu site na March 20.
Atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ gafere gbakwunye katalogi Xbox Game Pass n'ụzọ dị otu a. Ya mere, na mgbakwunye na inwe ọtụtụ egwuregwu dị, ndị ọrụ Xbox One ga-enwe ọtụtụ ọtụtụ ndị na-egbochi ngọngọ dị. Ihe na ọrụ a enweghị dị. Na mgbakwunye, atụmatụ ụlọ ọrụ na-agabigakwa na-enye ọrụ a na nkịtị na-echekwa. Mana amachaghị ihe gbasara atụmatụ ndị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ndi Consolas » Egwuregwu Xbox One Nanị Na-egwu Xbox Game Pass On Launch Day
Ihe mgbochi a nwere ike ịgba abụba ahụ ọkụ iji nyere gị aka ịkwụsị ibu